စိတျဖိစီးမှုတှမှေ သကျသာလာစရေနျ မိမိကိုယျကို ဘယျလို ပွုမူ နထေိုငျမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Health & Beauty/စိတျဖိစီးမှုတှမှေ သကျသာလာစရေနျ မိမိကိုယျကို ဘယျလို ပွုမူ နထေိုငျမလဲ ? ? ?
admin November 21, 2021	Health & Beauty Leaveacomment
စိတျဖိစီးမှုတှကေနေ သကျသာလာစရေနျ မိမိကိုယျကို နှေးနှေးထှေးထှေးဖွဈအောငျ ပွုလုပျဖို့လညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ မိမိကိုယျကို ဂရုစိုကျရမှာဖွဈပွီး မိမိစိတျကို ပြျောရှငျအောငျ ဘယျလို ပွုမူနထေိုငျရမလဲဆိုတာကိုလညျး ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ စဉျးစားနရေမှာဖွဈပါတယျ။ အရမျး စိတျဖိစီးမှု မြားနတေဲ့အခါမြိုးတှမှော ခြော့ကလကျပူပူလေးတဈခှကျဖြျောပွီး သငျ့အကွိုကျဆုံး ရုပျရှငျဇာတျကားကို ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျ စိတျဖိစီးမှုတှကေို သိသိသာသာ လြော့ကလြာမှာပါ။
၂။ သငျ့ပတျဝနျးကငျြမှ ကလေးငယျလေးမြားနဲ့ ပြျောပြျောရှငျနပေါ။
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ကလေးငယျလေးမြားနဲ့ ဆော့ကစားခွငျး၊ ပြျောပြျောရှငျရှငျနခွေငျးတို့ကလညျး သငျ့စိတျကို အပနျးဖွစေရေုံမြှမက စိတျဖိစီးမှုကိုလညျး လြော့ကစြပေါတယျလို့ ဖျောပွထားပါတယျ။ အပွဈကငျးစငျတဲ့ ကလေးငယျလေးမြားရဲ့ ပြျောရှငျမှုကိုကွညျ့ပွီး သငျကိုယျတိုငျလညျး စိတျပြျောရှငျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
၃။ အပငျြးပွေ လမျးလြှောကျပါ။
လမျးလြှောကျခွငျးက ပငျြးရိဖို့ကောငျးတယျလို့ ထငျကောငျးထငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ နစေ့ဉျပုံမှနျ လမျးလြှောကျပေးခွငျးဖွငျ့ ခေါငျးအတှငျးမှ အားရုံကွောတှကေို ပွလြေော့စရေုံသာမက၊ စိတျရောကိုယျပါ ငွိမျသကျစပွေီး အားအငျအသဈတှကေို ဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ပွငျပမှာ လကေ့ငျြ့ခနျး ပွုလုပျခွငျးကလညျး သငျ့ခန်ဓာကိုယျကို ကနျြးမာစရေုံသာမက စိတျကနျြးမာဖို့အတှကျပါ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။
၄။ နတေ့ဈနခေ့ငျြးစီအလိုကျ သငျ့ကိုစိတျကနြေပျမှုဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ခရြေးပါ။
နတေ့ဈနမှေ့ာ သငျ့ကိုစိတျပြျောရှငျစတေဲ့၊ စိတျကနြေပျမှုဖွဈစတေဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို စာအုပျထဲမှာ နစေ့ဉျခရြေးပါ။ ဒီလိုပွုလုပျခွငျးဟာ အခြိနျကုနျတယျလို့ ထငျရပမေယျ့ သငျစိတျဓာတျကနြတေဲ့အခါမြိုးတှေ၊ စိတျဖိစီးမှု ဖွဈနတေဲ့အခါမြိုးတှမှော သငျ့ကို စိတျသကျသာရာ ရစပေါတယျ။
ပီကဝေါးပွီး အပွငျကို မှုတျထုတျခွငျးကလညျး စိတျဖိစီးမှုတှေ၊ စိတျအလိုမကတြာတှေ၊ စိတျပငျပနျးတာတှနေဲ့ စိတျဓာတျကဆြငျးတာတှကေို လြော့ကစြတေယျလို့ လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ သိရှိရပါတယျ။
၆။ သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးပါသူတှနေဲ့ မကွာခဏတှဆေုံ့ပါ။
သငျ့ဘဝအတှကျ အရေးကွီးဆုံးသူတှဖွေဈတဲ့ ဘဝလကျတှဲဖျော၊ သူငယျခငျြးတှေ၊ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ မကွာခဏတှဆေုံ့ပွီး စိတျလကျ ပေါ့ပါးစနေိုငျမယျ့ ရုပျရှငျကွညျ့တာမြိုး၊ Game ကစားတာမြိုး၊ ညစာစားတာမြိုး၊ လြှောကျလညျတာမြိုးတှကေလညျး သငျ့ရဲ့ စိတျပငျပနျးမှုတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှကေို လြော့ကစြပေါတယျ။
၇။ အလှူအတနျး ပွုလုပျပါ။
သိပ်ပံနညျးကကြ လကျတှေ့ စမျးသပျခကျြတှအေရ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့လူတှေ၊ အခကျအခဲဒုက်ခ ကွုံတှနေ့ရေသူတှကေို ကူညီပေးခွငျးကလညျး စိတျပြျောရှငျမှုကို ဖွဈစနေိုငျတယျလို့ သကျသပွေထားပွီးဖွဈပါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့အနနေဲ့ လူအမြားနဲ့ ကိုယျတိုငျကိုယျကြ စုပေါငျး လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုလုပျဖို့ အခြိနျမရှိဘူးဆိုရငျလညျး သငျ့ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ဒုက်ခရောကျနတေဲ့လူတှကေို ကူညီပေးလို့ရပါတယျ။
၈။ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို အခြိနျပေးပါ။
သငျ့ရဲ့ အိမျမှေးတိရိစ်ဆာနျလေးတှကေို အခြိနျပေးပွီး သူတို့နဲ့အတူတူ ဆော့ကစားပေးခွငျးကလညျး ခန်ဓာကိုယျအတှငျးမှ သှေးဖိအားကို လြော့ကစြပွေီး စိတျဖိစီးမှုတှကေိုလညျး သကျသာစပေါတယျ။
စိတ်ဖိစီးမှုတွေကနေ သက်သာလာစေရန် မိမိကိုယ်ကို နွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပြီး မိမိစိတ်ကို ပျော်ရွှင်အောင် ဘယ်လို ပြုမူနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စဉ်းစားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရမ်း စိတ်ဖိစီးမှု များနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ချော့ကလက်ပူပူလေးတစ်ခွက်ဖျော်ပြီး သင့်အကြိုက်ဆုံး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို သိသိသာသာ လျော့ကျလာမှာပါ။
၂။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှ ကလေးငယ်လေးများနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်နေပါ။
လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ကလေးငယ်လေးများနဲ့ ဆော့ကစားခြင်း၊ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခြင်းတို့ကလည်း သင့်စိတ်ကို အပန်းဖြေစေရုံမျှမက စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ကလေးငယ်လေးများရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကိုကြည့်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ပျော်ရွှင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ အပျင်းပြေ လမ်းလျှောက်ပါ။
လမ်းလျှောက်ခြင်းက ပျင်းရိဖို့ကောင်းတယ်လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်ပုံမှန် လမ်းလျှောက်ပေးခြင်းဖြင့် ခေါင်းအတွင်းမှ အားရုံကြောတွေကို ပြေလျော့စေရုံသာမက၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ငြိမ်သက်စေပြီး အားအင်အသစ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ပြင်ပမှာ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခြင်းကလည်း သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေရုံသာမက စိတ်ကျန်းမာဖို့အတွက်ပါ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
၄။ နေ့တစ်နေ့ချင်းစီအလိုက် သင့်ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ချရေးပါ။
နေ့တစ်နေ့မှာ သင့်ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့၊ စိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာအုပ်ထဲမှာ နေ့စဉ်ချရေးပါ။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းဟာ အချိန်ကုန်တယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သင်စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အခါမျိုးတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ သင့်ကို စိတ်သက်သာရာ ရစေပါတယ်။
ပီကေဝါးပြီး အပြင်ကို မှုတ်ထုတ်ခြင်းကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ စိတ်အလိုမကျတာတွေ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းတာတွေကို လျော့ကျစေတယ်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ သိရှိရပါတယ်။
၆။ သင့်ဘဝအတွက် အရေးပါသူတွေနဲ့ မကြာခဏတွေ့ဆုံပါ။
သင့်ဘဝအတွက် အရေးကြီးဆုံးသူတွေဖြစ်တဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ မကြာခဏတွေ့ဆုံပြီး စိတ်လက် ပေါ့ပါးစေနိုင်မယ့် ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုး၊ Game ကစားတာမျိုး၊ ညစာစားတာမျိုး၊ လျှောက်လည်တာမျိုးတွေကလည်း သင့်ရဲ့ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ကျစေပါတယ်။
၇။ အလှူအတန်း ပြုလုပ်ပါ။
သိပ္ပံနည်းကျကျ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ချက်တွေအရ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေ၊ အခက်အခဲဒုက္ခ ကြုံတွေ့နေရသူတွေကို ကူညီပေးခြင်းကလည်း စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ သက်သေပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်အနေနဲ့ လူအများနဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ စုပေါင်း လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်း သင့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကို ကူညီပေးလို့ရပါတယ်။
၈။ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို အချိန်ပေးပါ။
သင့်ရဲ့ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လေးတွေကို အချိန်ပေးပြီး သူတို့နဲ့အတူတူ ဆော့ကစားပေးခြင်းကလည်း ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ သွေးဖိအားကို လျော့ကျစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုလည်း သက်သာစေပါတယ်။
Previous သိပ်ပံနညျးပညာအရ လလေ့ာတှရှေိ့ထားတဲ့ အသကျရှညျရှညျနထေိုငျနိုငျသော နညျးလမျးကောငျးမြား။
Next ရုပျရှငျရိုကျကူးရငျး မတ်ေတာမြှခဲ့ကတြဲ့ ကမ်ဘာကြျော စုံတှဲမြား။